I-Clipcentric: I-Rich Media kanye ne-Video Ad Creative Management | Martech Zone
Clipcentric inikeza abasebenzisi bayo ukukhethwa okubanzi kwamathuluzi nezifanekiso ezinikeza ukulawula okuphelele kuzo zonke izinyathelo zenqubo yokukhiqiza okuholela ezikhangisweni zemithombo yezindaba ezicebile eziphendula ngempela. Amaqembu esikhangiso angakha ngokushesha futhi athuthukise izikhangiso ezinamandla ze-HTML5 ezisebenza ngaphandle komthungo kunoma iyiphi indawo.
Hudula udedele indawo yokusebenza - Ngokudonsa uhudule bese uphonsa izingxenye zesikhangiso ezindaweni zokusebenza ezikhethekile zedivayisi ukulawula okuphelele, futhi lapho okubonayo yilokho okutholayo.
Ukugunyazwa kwe-HTML5 okuqinile - Khiqiza eyinkimbinkimbi I-HTML5 ukugqwayiza kusetshenziswa umugqa wesikhathi nozimele abangukhiye, kuqedelwe ngezenzo, izindawo lapho okuhlala khona, nokuxhumana nezinye izingxenye zesikhangiso.
Ukuhlelwa kohlelo - Lawula ukwenziwa kwe-in-situ usebenzisa imithetho yedatha yeklayenti ebalulwe ngesikhathi sokwakhiwa kwesikhangiso noma njengoba kuchazwe izifunzo zedatha yangaphakathi noma yangaphandle yesikhathi sangempela.
Qedela Ukuvumelana nezimo - Yakha noma iyiphi ifomethi yesikhangiso, kusuka kumafomethi ayisisekelo wesifanekiso ukuya ku- IAB Rising Stars kumafomethi wakho aphuma ngaphandle kwebhokisi, futhi unokuzethemba ukuthi bakulungele ukusebenza ngokuvumelana kuwo wonke amadivayisi.
Amafomethi afaka izikhangiso ze-in-banner, ezinwebekayo, ezintantayo, nezangemuva ezakhelwe amaselula, ithebhulethi, ideskithophu, ngaphakathi nohlelo, i-HTML5 namapulatifomu wevidiyo.
IClipcentric isusa izindleko nezithiyo eziyinkimbinkimbi ngokuvamile ezihlotshaniswa nokukhiqizwa kokukhangisa kwemidiya ecebile, okuvumela amaklayenti ethu ukuthi akhiqize ngokushesha izikhangiso ezinamandla neziphoqelelayo zokubonisa ngaphakathi, zixhaswe ngabashushumbisi abanamandla namathuluzi wokubika.
Isitudiyo seVideoAd sinomhleli wesikhathi sesikhathi sokuhudula bese uphonsa abasebenzisi ithuba lokulawula zonke izici zesikhangiso sevidiyo. Layisha okuqukethwe kwevidiyo futhi wenze ngezifiso isikhangiso ngemifanekiso yokunyakaza, imisindo, nomculo. Dala isikhangiso kusuka ekuqaleni usebenzisa i-database yabo yamavidyo kliphu wamabhizinisi amancane ukuya kwaphakathi.
Isihleli Somugqa Wesikhathi Wesiqeshana Ukukhiqizwa kwamavidiyo okusheshayo nokulula nge-interface eyenzelwe ukwakha izikhangiso. Mane uhudule okuqukethwe kwakho kumugqa wesikhathi bese ulungisa kahle ukubukeka nokuzizwa.
Idathabheyisi Yokuqukethwe Kwemidiya - Finyelela kulabhulali yethu yamavidyo kliphu, amathrekhi omculo, imiphumela yomsindo, nehluzo ezinyakazayo ukukhiqiza amavidiyo anenani eliphezulu lokukhiqiza ngaphandle kwezindleko zokukhiqiza.
Lokukhipha nezimo - Faka amavidiyo wakho ngaphandle komthungo emikhakheni yakho ecebile yemidiya, sebenza ku-inthanethi kubadlali bevidiyo abathobela i-VAST noma ithrafikhi eziteshini zethelevishini.
Tags: clipcentricizikhangiso zamavidiyo ezinwebekayoizikhangiso zevidiyo ezintantayoizikhangiso zevidiyo ezingaphakathi kwama-bannerisikhangiso semidiya esicebileizikhangiso zemidiya ezicebileukukhiqizwa kwesikhangiso sevidiyoizikhangiso zevidiyoizikhangiso zangemuva